जीवनशैली – Page3– America Nepal
सैनिक कारबाहीमा एकै दिनमा ८४ आतङ्ककारी मारिए
काबुल, १८ साउन । अफगानिस्तानमा भएको सैनिक कारबाहीमा एकै दिनमा करिब ८४ आतंककारी मारिनुको साथै अन्य ७४ जना घाइते भएका अफगान रक्षा मन्त्रालयले बुधबार जानकारी दिएको छ । अफगान सुरक्षाबलले २१ स्थानमा सो कारबाही जारी राखेका थिए । त्यसगरी अफगानिस्तानको ३४ प्रान्तमा १५ वटामा तीन दिनसम्म सुरक्षाबल विशेष कारबाही जारी राखेका थिए । विशेष सुरक्षा बलले उक्त कारबाहीमा तीन स्थानीय
नगरकोटमा त्यो रात, म यसरी लुटिएँ..
'ओइ, नगरकोट जान्छेस् ?' उसले साँझ पर्दैगर्दा फोन गर्यो । कोठामा एक्लो थिएँ । मन कता कता डुलीरहेथ्यो । राती बस्ने नै गरी हो?' मैले सोधें । 'अव तँसँग गएपछि के फर्काइ भयो र !' उसले केहि अफ्ट्यारोसँग सुनायो ! 'हुन्छ म आएँ !' त्यो रात उसले नगरकोट 'लग्यो ! पढ्न भनेर काठमाडौँ आएकी मेरो लागी त्यो पहिलो नगरकोटको बसाइ थियो! 'भर्खर पिउन थालेकी छेस, तँ वियर नै खा ! मचाहिं 'हार्ड लिन्छु' उसले
जागिर खान जाँदा यसरी लुटियो मेरो जवानी
Sunita koirala बुवाको निधनले मलाई पारिवारिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने बाध्यता यसअर्थ आएको थियो कि मेरी दिदीको बिहे भइसकेको थियो र म नै ममीपछिको घरमुली थिएँ । मेरा दुइ भाइ र दुइ बहिनीको तुलनामा घरको भार बोक्न मलाई नै योग्य तुल्याएको थियो मेरो उमेरले । म १७ बर्षको भइसकेकी थिएँ । यौवनको रङ, रुपले मलाई छोपिसकेको थियो । खुला मनले सबैसँग बोल्न रुचाउँथे तर शारीरिक रुपमा म कसैसँग निकट थिइनँ ।
साँझमा यसरी मेरो अस्मिता लुटियो
असार ११ धादिङ । झमक्क साँझ पर्दा उनी धादिङबेंसीको बीचबजारमा हिँडिरहेकी थिइन्। एउटा जिप ढेपिँदै आएर रोकियो। ‘कहाँ जाने बैनी रु’ ड्राइभरले सोध्यो। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – पुलुक्क हेरेर उनी अर्कोतिर फर्किइन्। बिस्तारै हिँडिरहिन्। बा ५ च ३११ को बोलेरो पनि उनकै छेउ–छेउ गुडिरह्यो। ‘भन न, कहाँ जाने रु’ चालकले फेरि सोध्यो। ‘दामगाडे’ भन्दै उनी हिँडिरहिन्। ‘बस’ उसले भन्यो,
कोही कोही केटा त यति मन पर्छ कि भन्न मात्र सकिन्न : मेलिना राई
पाश्र्वगायनमा जम्दै गरेको नाम हो, मेलिना राई । भारतको दार्जिलिङमा बाल्यकाल बिताएकी मेलिना आफ्नै बुबाको संगीत शिक्षाले गायनमा निखारिएकी हुन् । सयभन्दा बढी गीत गाइसकेकी उनले दर्जनजति फिल्ममा स्वर दिएकी छिन् । फिल्म ‘नाइँ नभन्नू ल–३’ को ‘कम्मरमाथि पटुकी’ बोलको गीतले उनलाई बढी चर्चा दिलायो । ‘पलभरमै खुशी’, ‘डुब्दै गएँ म’, ‘माया मलाई’, ‘छाडी जाने भए जाऊ मायालु’ उनका रुचाइएका
मेरो ध्यान पुरुषको बाहिरी कुरामा भन्दा पनि भित्री कुरामा जान्छ :मेलिना राई
मेलिना राई, गायिका मेरो ध्यान पुरुषको बाहिरी कुरामा भन्दा पनि भित्री कुरामा जान्छ । उसले कस्तो कपडा लगाउँछ, हेयर स्टाईल कस्तो बनाउँछ, चस्मा कस्तो लगाउँछ दाह्री पाल्छ÷पाल्दैन भन्ने कुराहरु मेरो प्राथमिकतामा पर्दैनन् । मलाई जेन्टल, सिम्पल र बौद्धिक पुरुष आकर्षक लाग्छ । महिलालाई सम्मान गर्ने पुरुष मेरो मनमा बसिहाल्छन् । महिलालाई सम्मान नगर्ने खालको पुरुष छ भने ऊ जतिसुकै
पुछिएको सिन्दुर फेरी लगाउने मन छ
चसक्क मुटु बिझाउने गरी फेरी आज पनि सम्झिएँ तिमीलाई । सकिँदो रहेनछ त्यो छुटपत्रको कागजमा साईन गरेर सजिलै तिमीले सम्बन्ध टुटाएजसरी मैले टुटाउन सकिनँ । यस्तो लाग्छ अँझैपनि कतैबाट मसामु पहिले जस्तै गरी मलाई खोज्दै आउँछौ कि भन्ने अँझै लाग्छ कतै यी हावाको वेगसँगै तिमीले मप्रतिका स्पर्श पठाएका छौ कि भन्ने । अनि हुन्छु म अदृश्य कल्पनामा, हराउँछु सपनिमा रुन्छु विपनिमा । साँच्चै
क्रिष्टियानो रोनाल्डोलाई कर छलेको अभियोगमा ७ वर्ष जेल हुन सक्ने
साउन १७ – स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका स्टार स्ट्राइकर क्रिष्टियानो रोनाल्डोमाथि कर छलेको अभियोगमा ७ वर्षको जेल सजाय हुन सक्ने छ । उनीमाथि विभिन्न चार पटक कर छलेको आरोप लागेको छ । उनले जरिवाना वापत केही रकम तिरे जेल सजाय कम हुन सक्ने बताइएको छ । मुद्दा मड्रिडको उच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने सम्भावना देखिएको छ । घटनाको सम्बन्धमा सोमबार भएको सुनुवाइमा रोनाल्डोले आफ्ना एजेन्टको
यस्तो संकेत देखिए धन लाभ हुन्छ
शास्त्रमा शुभ र अशुभ संकेतहरुको चर्चा गरिएको छ । विभिन्न संकेतबाट शुभ हँदैछ कि अशुभ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यस्ता संकेतले भविष्यमा हुने घटनाले तपाइँलाई राम्रो गर्छन् कि नराम्रो भन्ने थाहा दिन्छन् । धन प्राप्तीका लागि कस्ता संकेत शुभ ? १ यदि तपाइँको दायाँ हातको हत्केला चिलायो भने बुझ्नुस् तपाइँलाई धन हात पर्दैछ । बैंक जाने समयमा बाटोमा गाइ देख्नु भो भने तपाइँको काम पुरा
घरमा कमिलाले दाना ओसारेको देखे नराम्रो घटना घट्छ
शास्त्र र पुराणहरुमा हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएका कही यस्ता आदतहरुको दाबी गरिएको छ, जुन हेर्दा सामान्य लागछ, तर वास्तवमा हामीलाई आउँन लागेको समयको बारेमा । यदि तपाई पनि शास्त्रलाई मान्नुहुन्छ भने तपाईका लागि केही जानकारी निम्न छन् १. कमिला – शास्त्रअनुसार, यदि अचानक घरमा कमिलाले दाना ओसारेको देखे वा ताती देखिएमा, यसले निकट भविष्यमा केही नराम्रो हुने आशंका पैदा गर्ने